American Medical Zvishandiso | Mawiricheya muNew Jersey | KarmanHealthcare.com
Kutsvaga mavhiripu muNew Jersey? Iwe pamwe unoda kutenga usati watenga? Kana kutotenga online uye uzive kuti urikutsigira amai vemuno nepop shop.
Tenga Karman Wiricheya muNew Jersey Kubva kuAMES
"Tinoramba tichifamba." Tiri kufamba vagadziri. Isu tinoziva kuti une hanya newevhiri cheya cheya, ndosaka timu yedu yevanamazvikokota vehunyanzvi ichave nechokwadi chekuti iwe unogashira akanakisa maitiro muindastiri, kunyanya pakutenga mavhiripu muNew Jersey.
Huya uzvionere wega. Paunounza yako wiricheya kwatiri kuti tigadzirise kana kugadzirisa, isu tichakubata iwe neruremekedzo uye chiremerera. Hatizokunetseke nemari zvisina basa.
Isu kuAmerican Medical Equipment, tinoziva Wheel Chair yako inopfuura kukwira kunokusvitsa kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe; ndiyo nzira yako yekuratidza rusununguko. Wako wiricheya inokutendera yose zviitiko zvakakosha zvezuva nezuva sekufamba kuenda nekudzoka kubasa, kutenga grocery, uye kutora vana kubva kuchikoro. Iwe unotsamira pazviri, ndosaka pa AME isu tichive nechokwadi chekuti vatengi vedu vanogashira unhu kugadzirisa uye basa. Paunounza Wako Wiricheya ku AME, tinozviisa pamberi pedu kuti zvinosiya zvisina dambudziko kuitira kuti uve nerusununguko uye rugare rwepfungwa.
Ndokumbirawo kuti mushanyire e-chitoro chedu kuti muone sarudzo dzatinotakura mavhiripu muNew Jersey. Tinoda kuti nzvimbo yedu igamuchire nekukoka vese vari online uye nepamunhu.
KuAmerican Medical Equipment chinangwa chedu ndechekubatsira mumwe nemumwe akashupika kana remara munhu kuti adzore hupenyu hwavo uye vadzokerezve yavo yakanaka mufananidzo weyakajairika. Tinonzwisisa kukosha kwekusununguka uye kuzviriritira. Yedu-ye-iyo-iyo moyo zvigadzirwa inobvumidza iyo yemuviri yakakwenenzverwa kuti irambe ichinakidzwa nehupenyu uye ichidzokera kune imwe pfungwa yeyakajairika.
Orenji, NJ 07050
mavhiripu muNew Jersey Chitoro
I-LT-980 ndiyo yakakwikwidza pamutengo, mutengo wepasi pasi uripo wiricheya inorema mukati makumi maviri nemaviri, wiricheya. * Iyo huremu hwehuremu ingori gumi nematatu lbs., Uye ichifananidza neimwe minhenga uremu zvikamu inowanikwa pamitengo yepamusoro.
Mahara Mahara Ekushanyira muOrange County
Maitiro ekugadzirisa kana kutsiva Wiricheya yako